गगन थापाले राजालाई ढुंगा हानेकै हुन, एमाले जस्तो राजाको टाट्नोमा घास नखानु उनको गल्ति हो ?
अस्ति मात्र सफल प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको लाइ झम्टिन जादा प्रहरीको लाठि खाएपछि बहुलाएका बाम कार्यकर्ता ले यति सम्म गर्नु कुनै अनौठो चाहि होइन। तर गगन थापाको त्यो फोटो भने जनआन्दोलन बेलाको हो। जुन बेला राजाको जाहानिया र निरङ्कुश शाशन को बिरुद्द सम्पूर्ण नेपालि जनता आन्दोलनमा थिए।
प्रदेश राजधानीको माग राख्दै भएका आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै
प्रदेश राजधानीको माग राख्दै देशका विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन जारी छ । केही जिल्लामा सुरु भएका आन्दोलन शान्तिपूर्ण र्‍याली, धर्ना र आमसभामा सीमित छन् भने केही जिल्लाका आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएका छन् ।
एमाले नेता तथा पुर्वमन्त्री लालबाबुलाई तीन महिना जेल
सामान्य प्रशासन मन्त्री भएर चर्चा कमाएका पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले एक जना नायिकासँगको भेटमा १ हजारको नोटमा केरमेट गरेर सफा नोट नीतिको धज्जी उडाउका छन् ।आफू सधैं कानूनको पालना गर्ने बताउँदै आएका पूर्वमन्त्री एवं मोरङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित सांसद पण्डितले अभिनेत्री केकी अधिकारीलाई १ हजार रुपैयाँको नोटमा हस्ताक्षरसहित केरमेट गरेर अटोग्राफ दिएका हुन् ।
भट्ट देउवासँग मिलेको बात लागेपछि आयो यस्तो विज्ञप्ति
नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना नेता लेखराज भट्टविरुद्ध आन्दोलन र आन्दोलनका क्रममा पुत्ला दहन गरिएकामा आपत्ति जनाएको छ ।
कानुनविद्हरुले संविधानको धाराको व्याख्या गरेर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने
संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मंचले विहिबार काठमाडांैमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने दावी गरे ।
दोस्रो बैठकको मिति तय -एमाले-काँग्रेस मिलेर सरकार बनाउने झुक्ति शुरु
नवराज सिलवालबारे यस्तो छ नयाँ अपडेट (पत्रसहित)
नेपाल प्रहरीले नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित सांसद तथा पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाललाई पक्राउ गर्न होइन, उपस्थित गराउनका लागि पत्राचार गरेको खुलेको छ ।
ओलीसंगको भेट अनिश्चित बनाउदै किन एक्कासी काठमाडौँ छोड्न लागे प्रचण्डले ??
भरतपुर महानगरपालिकाको नगरपरिषदमा सहभागी हुन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बिहीबार दिउँसो चितवन जाने भएका छन्।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु पुगे शीतल निवास
आज विहिवार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शीतल निवास भेट्न पुगेका छन् ।
काठमाण्डौंमा रहेको एक अपार्टमेन्टमा आगलागी, एकको मृत्यु
काठमाडौंको सानो गौचरणस्थित केएल रेसिडेन्ट अपार्टमेन्टमा बुधबार साँझ आगलागी भएको छ । आगलागीबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
प्रदेश राजधानीमा मनमुटाब : बुटवलमा कांग्रेसको चक्काजाम
बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म बुटवलको अस्पताललाइन, मणिग्राम चोक र मुर्गियामा चक्काचाम गरेको हो । चक्काजाममा सहभागीले आज बस्ने मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रदेशको राजधानी दाङ घोषणा गरे त्यसलाई कुनै हालतमा नमान्ने चेतावनी दिएका थिए ।
देउवा सरकार बिरुद्ध रुपन्देही कांग्रेसको आन्दोलन सुरु
५ नम्बर प्रदेशको केन्द्र बुटवल बाहेक अन्यत्र बनाउने चलखेल गरेको भन्दै रुपन्देही कांग्रेस दुउवा सरकार बिरुद्ध आन्दोलित भएको छ ।
नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनको अध्यक्षमा ढुंगाना
आज साँझ हुने एशोसिएशनको विशेष साधारण सभाले यसलाई अनुमोदन गर्ने भएको छ । गत वर्ष मंसिर २ गते अध्यक्षमा निर्वाचित भएका बैंकर अनिल केशरी शाहले जागिर छाडेसँगै सो पद खाली रहेको थियो । शाहले गत महिना मेगा बैंकबाट राजिनामा गरेपछि एशोसिएशनको अध्यक्ष स्वतः खाली भएको हो ।
विप्लवको दबाबमा भूकम्पपीडितले पाए राहात पैसा फिर्ता
भूकम्पपीडितको घरको नक्सा पास गर्ने भन्दै कन्सल्टेन्सीले लिएको रकम विप्लवका कार्यकर्ताको दबाबमा फिर्ता गरिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
गठबन्धनबाट बाहिर गएर प्रधानमन्त्री बन्ने मेरो चाहना छैन –प्रचण्ड [भिडियोसहित]
बुधबार दिँउसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाडामा आयोजित एक कार्यक्रमपछि पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै प्रचण्डले गठवन्धनभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री बन्नेबारे आफूले नसोचेको बताएका हुन् ।
नवराज सिलवाललाई खोज्दै गएका प्रहरी रित्तो हात फर्किए
सिलवालले भने– देउवा र प्रकाश अर्याल प्रतिशोधमा उत्रिए
आयो मोदी का लागी दुखद खबर
सन् २०१८ मा भारतलाई छिमेकी मुलुकहरूबाट नयाँ चुनौती आउनसक्ने सम्भावना छ । लगभग सबै छिमेकीमा आगामी १६ महिनामा चुनाव हुने भएका छन् ।भारतका साथ बन्दै अनि बिग्रँदै गरेको सम्बन्धका बीच केही देशमा सत्ता परिवर्तनको संकेत पनि पाइएको छ । दोक्लम विवाद सुल्झाउनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने विजय केशव गोखले आगामी विदेश सचिव बन्दैछन् ।
राजधानीमा अत्याधिक चिसो, वर्षकै सबैभन्दा कम तामपक्रम आज
काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम बुधबार यस वर्षकै कम भएको मौसमविदले बताएका छन् । बुधबार बिहान काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम २ दशमलभ २ डिग्री सेल्सियसमा झरेको मौसमविद विभूति पोख्रेलले बताए ।
काठमाडौं, १२ पुस– ललितपुरको ग्वार्को क्षेत्रमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीकी पत्नी एकदिन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा हाकिमसँग झगडा गर्न आइन् ।
बेलायती सेनाका मगरको ‘हिमालमा चिप्ल्याउने’ पर्यटन अभियान
नेपालमा स्किइङलाई पर्यटक आकर्षण गर्ने क्षेत्रको रुपमा धेरै कमले मात्र हेरेका छन्। तर बेलायती सेनामा कार्यरत कृष्ण थापा मगरले चाहिँ २०११ बाट स्किइङलाई पर्यटकीय
नेपाल र भारतबीच विद्युत खरिद सम्झौता तीन महिनाका लागि नविकरण
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको विद्युत व्यापारको नोडल एजेन्सी (एनभिभीएन) लिमिटेडबीच तीन महिनाका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता नविकरण भएको छ ।
१२ पुस, चितवन । निर्माणधिन नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डलाई रातको समयमा वन्द गरिने भएको छ । कामको गतिलाई बढाउन भन्दै पुस १८ गतेदेखि राति १० बजेबाट विहान ४ बजेसम्म सडकखण्ड वन्द गर्न लागिएको हो ।
काठमाडौं, पुस १२-हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने सम्भावना सँगै त्यस क्षेत्रमा चिसो बढेको छ ।
पोखराबाट भाचोक जार्दै गरेको ना ३ छ ७४३६ नम्बरको यात्रु वाहक वस भाचोक नजिकै पुगेपछि सडकको छेउको भाग भासिएर मार्दी गाँउ पालिका
हिले भर्खरै काठमाडौंको टोखामा गोली चलेको छ। गोली लागेर एक महिला घाइते भएकी छिन्।